I-china Auto Ac Compressor Ye-Honda N-BOX / Honda Brio / Honda Jazz abakhiqizi nabaphakeli | UHollysen
I-compressor ye-automobile air conditioner "yinhliziyo" yohlelo lokupholisa umoya lwezimoto. Lapho uhlelo lokupholisa umoya lwemoto luvuliwe, icompressor iyaqala ukusebenza, icindezele futhi iqhube isiqandisi ngohlelo lokuvala umoya oluvaliwe.
BRAND ENTSHA AUTO AC samandla
I-automobile air conditioning compressor "yinhliziyo" yohlelo lokupholisa umoya lwezimoto. Lapho uhlelo lokupholisa umoya lwemoto luvuliwe, icompressor iyaqala ukusebenza, icindezele futhi iqhube isiqandisi ngohlelo lokuvala umoya oluvaliwe. Isifriji simunca ukushisa emotweni ngokushintshisana ngokushisa ku-evaporator, bese sisabalalisa ukushisa kuye ngaphandle kwemoto nge-condenser, ukuze kunciphise izinga lokushisa emotweni futhi liyenze ibe sendaweni entofontofo.
Uhlobo lwengxenye: A / C Compressors
Ubukhulu bebhokisi: 250 * 220 * 200MM
Isisindo somkhiqizo: 5 ~ 6KG
Isikhathi sokulethwa: Izinsuku ezingama-20-40
Iwaranti: Iwaranti engu-1 YamaMileji Angenamkhawulo
Xilonga futhi uthole izinkinga ze-ac
Uhlelo lwesiphephetha-moya semoto uhlelo lokujikeleza kwegazi oluvalwe ngawodwana. Kuhlobene nokunethezeka kokuhamba, umnotho nokuphepha kwemoto esebenza ngokujwayelekile. Ukuhlola uhlelo lokupholisa umoya lwemoto.Okokuqala, kufanele ujwayelane nayo futhi uqonde uhlelo lokupholisa umoya lwemoto, wazi kahle isimiso sayo sefriji, ukumiswa kohlelo, isakhiwo, umsebenzi, njll .; futhi ube nekhono ebudlelwaneni nasekusebenzeni kokucushwa; Iyazi okuhlukahlukene okungenzeka noma kulula ukukhiqiza Izimpawu, kubangela nezindlela zokuxazulula inkinga zokwehluleka.
Ukuhlola nokuhlolwa kwamafriji compressors:
Isimisi sefriji siyinhliziyo yohlelo lwemoto yokupholisa umoya. Inesibopho sokucindezelwa nokusakazwa kuketshezi olusebenza efrijini. Imvamisa kufanele kube ukuhlolwa nokuhlolwa kokusebenza kokucindezelwa nokuvuza.
Ukuhlola ukusebenza kahle kokucindezelwa kwe-compressor, ngaphandle kokuqaqa uhlelo, kuyadingeka ukuxhuma isilinganiselo sokucindezela esinezindlela ezintathu esibekelwe ukuhlolwa.
Lapho kunenani elithile lefriji ohlelweni, injini iyashesha. Ngalesi sikhathi, i-pointer yegeji enengcindezi ephansi kufanele yehle ngokusobala, futhi ingcindezi ephezulu izophakama kakhulu. Ukukhula okukhulu kwephiko, kukhulu ukwehla kwesikhombi, okukhombisa ukuthi icompressor isebenza kahle; uma isheshisa Isikhombi semitha yengcindezi ephansi sehla kancane futhi izinga lokwehla alilikhulu, okukhombisa ukuthi ukusebenza kahle kokucindezelwa kwe-compressor kuphansi; uma isikhombisi semitha yengcindezi ephansi ngokusobala singakhombisi lapho sishesha, kusho ukuthi icompressor ayinakho ukusebenza kokucindezelwa nhlobo.
Ingxenye esengozini enkulu ye-compressor evuzayo yi-shaft seal (Uwoyela). Njengoba i-compressor ivame ukuzungeza ngesivinini esikhulu futhi izinga lokushisa lokusebenza liphezulu, uphawu lwe-shaft lujwayele ukuvuza. Lapho kuneminonjana kawoyela ku-clutch coil nasenkomishini yokudonsa ye-compressor, uphawu lwe-shaft luzovuza nakanjani.
Izizathu eziyinhloko ezibangela ukulimala kwe-compressor yilezi:
1. Uhlelo lokupholisa umoya aluhlanzekile, futhi ukungcola kwezinhlayiyana kufakwa ku-compressor;
2. Ifriji eyeqile noma uwoyela wokuthambisa ohlelweni kubangela ukulimala ku-compressor nge- "hammer liquid";
3. Ukushisa kokusebenza kwe-compressor kuphakeme kakhulu noma isikhathi sokusebenza side kakhulu;
4. I-compressor iswele uwoyela futhi igqoke kakhulu;
5. I clutch kagesi ka compressor amahlumela kanye lokushisa ingxabano liphezulu kakhulu;
6. Ukucushwa kwamandla kwe-compressor kuncane kakhulu;
7. Ikhwalithi yokukhiqiza ye-compressor ayilungile.
Honda I-Jazz 07
Ukupakisha ibhokisi elijwayelekile noma ukupakisha ibhokisi lemibala yangokwezifiso.
Langaphambilini 12v 24v ephathekayo Universal Roof Phezulu Onyuswe Truck Sleeper Electric Auto yokupaka Cooler Ekupholiseni
Olandelayo: Ac Compressor Manufacture Factory YeMazda CX3 / Mazda Demio / Mazda 3
Auto Ac samandla futhi bamba Assembly Manufact ...
12V Auto Ac samandla For Mitsubishi Colt / MI ...
Ac samandla Ukwakha Factory Ukuze Mazda CX3 ...
12V Auto A / C samandla Ukwakha Factory For ...
Brand New AC samandla nge bamba Ukuze Nissan ...